Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ayaa ka hadlay xiisada ka taagan gobolka Gedo… – Hagaag.com
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ayaa ka hadlay xiisada ka taagan gobolka Gedo…
Posted on 5 Janaayo 2021 by Admin in National // 0 Comments
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya, Maxamed Xasan Cirro, ayaa markii ugu horaysay ka hadlay xiisada ka taagan gobolka Gedo iyo mowqifka uu guddiga doorashadu ka taagan yahay cidda maamulaysa doorashada lagu qabanayo Garbahaareey.
Guddoomiyaha guddiga doorashada Maxamed Xasan Cirro ayaa sheegay in arrinta ka taagan Gedo ay tahay khilaaf siyaasadeed oo iyaga ka sarreeya loona baahan yahay in dowladda federalka iyo maamulka Jubbaland ay xal buuxda ka gaaraan ka hor doorashada.
“Anaga guddi ahaan waxaan soo dhoweynaynaa tallooyinka Axmed Madoobe, laakiin arrinta Gedo, waxaan kuu sheegi karaa in ay tahay arrin guddigeena ka sareysa oo la rabo in ay iyagu ka heshiiyaan oo noo sheegeen meesha doorashadu ka dhacayso” ayuu yiri guddoomiye Cirro.
Wuxuu sheegay guddoomiyuhu in guddi ahaan ay diyaar u yihiin in ay dhegaystaan cabashada madaxweyne Axmed Madoobe uu ka qabo guddigooda islamarkaana ay tixgalin doonaan talooyinkiisa odeytinimo.
“Heshiiska doorashada ee aan hayno wuuxu sheegayaa in Axmed Madoobe uu masuul ka yahay doorashada ka dhacayso Gedo iyo guud ahaan Jubbaland, laakiin awood uma lihin in aan xal ka gaarno khilaafka siyaasadeed ee hadda ka taagan Gedo.
Gobolka Gedo ayaa haatan waxaa gacanta ku haya dowladda federalka Soomaaliya. Madaxweynaha Jubbaland ayaa dalbanaya in dib gacantiisa loogu soo celiyo si uu u maamulo doorashada xildhibaanada.